Posted by K | 02/09/2010, 16:22
မကေကတော့ ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းမေးနေပြန်ပါပြီ။ ဘယ်နှယ့်ဖြေရပါ့။ ရွှေနှစ်ထောင်ကျော်မယ်ဆိုရင် ၀ယ်ထားဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ 🙂
Posted by zizawa | 02/09/2010, 16:55
ဒါဆို ရွှေဝယ်နိုင်တဲ့ လူတန်းစားကတော့ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာရင်းပေါ့လေ …… လောကကြီးက မတရားဘူး။
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 03/09/2010, 03:26
Good question!! But I don’t know the answer. ဆိုပြီး အဖြေပေးရမှာဘဲ မမိုးစက်ပွင့်ရေ..
Posted by zizawa | 03/09/2010, 12:46
မမိုးစက်ပွင့်ကို အကြောင်းပြန်ရင်း ဒီအကြောင်း ဆက်လေ့လာချင်သူတွေကို အညွှန်းပေးလိုက်ပါရစေ။ ပိုက်ဆံ Money နဲ့ ပတ်သက်ရင်အဖတ်သင့်ဆုံးက ကျွန်တော့အထင်မှာ Karl Max ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူက အရမ်းအရမ်းကို abstract ဖြစ်တယ်။ သီအိုရီ ဆန်တယ်။ နေက် Marx က Econonomics ကွက်ကွက်လေးကိုပဲ ကိုင်တာမဟုတ်ဖူး။ Fernand Braudel ရဲ့ သုံးအုပ်တွဲ စာအုပ်က ပိုက်ဆံဖြစ်လာပုံကို သမိုင်းနောက်ခံနဲ့ ရှင်းထားတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ စာအုပ်နံမယ်က Civilization and Capitalism တဲ့။ အထူးသဖြင့် ပထမစာအုပ် အခန်း ၇ ကစပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ ခုနောက်ဆုံးထုတ်ကတော့ Niall Ferguson ရဲ့The Ascent of Money ဆိုတာ။ ခု Banking Crisis ဖြစ်ပြီးနောက်မှ ထွက်လာတဲ့စာအုပ်။ Ferguson က Harvard historian. အဲဒိစာအုပ်လည်း အင်မတန့် အင်မတန် ဖတ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ သူက modern reader တွေအတွက် ရေးထားတော့ နားလည်ရပိုလွယ်တယ်။
Posted by watote | 03/09/2010, 13:24
မနေ့ညက ခုရေးခဲ့တဲ့စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခုခုကို ဘ၀င်မကျလို့ စဉ်းစားနေတုန်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးတခုရတယ်။ credit card အကြွေးက စားသုံးသူကအာမခံထားရတဲ့ အကြွေးပဲ။ ဒါပေမယ့် စားသုံးသူက ဆိုင်ရှင်ကို အာမခံတာမဟုတ်ဘဲ credit card ထုတ်ပေးထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကို ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုပြီး အာမခံထားတဲ့အကြွေးဖြစ်တယ်။ ဈေးရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားမှာ ၀င်ပြီး facilitate လုပ်ပေးမယ့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မရှိဘူးဆိုပါစို့။ ဈေးရောင်းသူက ၀ယ်သူကို အကြွေးနဲ့ရောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးရောင်းသူက ၀ယ်သူအကြွေးပြန်မဆပ်ရင် သူ့ကိုဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲဒိတော့ ဥပဒေပြင်ပကနေ လက်စားချေဖို့နည်းလမ်းပဲရှိတယ်။
Posted by watote | 04/09/2010, 10:47